CCNA လက်မှတ်ရပညာရှင်များ - အင်တာဗျူးမေးဖြေ - ၎င်း၏
အဆိုပါ CCNA များအတွက်အင်တာဗျူးမေးဖြေ
CCNA သို့မဟုတ် "Cisco Certified Network Associate" လက်မှတ်အများဆုံးတစ်ခုလုံးကိုကမ်ဘာပျေါတှငျ Cisco အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ပြီးနောက်မျွောအကြားတစ်ဦး standout ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သန်း Cisco ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှထွက်ရှိအပါအဝင်နည်းနည်းနှင့်ကျယ်ပြန်တိုင်းတာအဖွဲ့အစည်းများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရှိပါတယ် MNCs ကို။ Cisco ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အိုင်တီနှင့်ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် CCNA လက်မှတ်ကြီးမားအရေးပါမှုကိုရရှိထားသူနှင့်မြင့်မားသောလစာနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်အားသာချက်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျ certified ရရှိထားပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦး CCNA သောအဖြစ်အပျက်မှာအောက်မှာပေးထားတဲ့မေးခွန်းများကိုဖြစ်ကောင်းသင်သည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်တာဗျူးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သည့်အခါဖွင့်လာမယ့်နေကြသည်။ အဆိုပါဖွင့်ဘို့အဆင်သင့်ကောင်းစွာရအလားအလာန်ထမ်းတွေ့ကြံ-up, လာမယ့်ထိထိရောက်ရောက်ကြောင့်ရှင်းလင်းရန်ဖို့စိတျထဲမှာအဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုစောင့်ရှောက်သူတို့ကိုခံစားရသည်။
routing အရင်းအမြစ်မှနိဂုံးပန်းတိုင်အစုံလိုက်သုံး packet ယူပြီးဆီသို့လမ်းဖြစ်၏။ switch ရည်မှန်းချက် ip address ကိုပေါ်မူတည်သည့်လမ်းကြောင်းမပေးသော gadget ကဖြစ်ပါတယ်။ switch တုံအဓိကအကြောင်းရင်းအားဖြင့်ခုန်ပေါ်မှာဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါဘူး။
ကွန်ရက်ရှိဒေတာ Link ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဘာလဲ?
ဤအလွှာဒေတာ, နည်းမှန်လမ်းမှန်ဒီဇိုင်းအမှားတည်နေရာနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာနှင့်အချက်အလက်မူတည်ပါးနေသည်သေချာနေသည်သေချာ။ ဤ "Ethernet ဟာ" နေထိုင်ရာအလွှာဖြစ်ပါတယ်။ Macintosh လိပ်စာနှင့် Ethernet ဟာအောက်လိုင်းကို data link layer ပေါ်မှာရှိပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် switches များကွန်ရက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်နေကြသနည်း
အပြောင်းအလဲများတစ်ဦးသင့်လျော်သောလမ်းအတွက်ကွန်ယက်စကေးရည်ရွယ်နေကြသည်။ switches သဘာဝကျကျဒါအကျိုးဆက်အမြန်နှုန်းကိုတိုးချဲ့, Macintosh လိပ်စာမြင်ကွင်းထဲမှာသို့ကြည့်လုပ်နေတာ,2gadget ကထပ်ထားနေကြသည်။
ကွန်ယက်ဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးလက်မခံကြောင်း, ဂရုမစိုက်ဘူးအဖြစ်အမျိုးမျိုးသော clients များတူညီကွန်ယက်ဂီယာစွမ်းရည်အသုံးချမှအသုံးချသို့မဟုတ်ကြိုးပမ်း (ကွန်ယက်ချန်နယ်၏ကြေကွဲအချက်နှင့်အရည်အသွေးထက်သာလွန်) အခါအမှတ်မှာပိတ်ဆို့ခြင်း, ဖြစ်ပျက်၏။ အနိမ့်မြန်နှုန်း interface ကိုဒေတာကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အာကာသရှိသည်ပါဘူးကတည်းကနောက်ပိုင်းတွင်ဒေတာကျဆင်းသွားသည်။
အဆိုပါငြမ်းလိုင်းများကွန်ယက်၎င်း၏အရွယ်အစားချိန်ညှိမဟုတ်နေစဉ်။ ဒါဟာတူညီတဲ့နှင့်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာစာပေးစာယူစည်းဝေးကြီးတစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောမည်သည့်2ကွန်ယက်ကိုအပိုင်းအစများအကြားအချက်အလက်များ၏ချောထုပ်ဖြတ်သန်းပါတယ်။
LAN protocol ကိုပြောင်းထားတဲ့မှတဆင့် Cisco Catalyst လုပ်ဆောင်ချက်များကို?
Cisco Catalyst 5000 switching စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုနှင့် technique ကို "မှတဆင့်အချပ်" ဟုအဆိုပါ utilizations ။ switching မှတဆင့်လှီးပန်းတိုင်လိပ်စာအသိအမှတ်ပြုသောအခါအစွန်းပေးပို့ခြင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။ ဤအကြားခြားနားမှုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်-and Forward Store ကို-and Forward ပေးပို့ခြင်းမပြုမီတစ်ခုလုံးကိုထည်ရရှိသွားတဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စတိုးဆိုင်နှင့်ရှေ့ဆက်၏ဖြစ်ရပ် Catalyst 2960 နှင့် 2960-S ကဖြစ်ပါတယ်
တွန်းအား 3750-X နှင့် 3560-X ကို။
အကြမ်းဖျင်းတင်းတင်းပြောတတ်တဲ့ရုံရည်မှန်းချက်လိပ်စာ perusing ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်မရနိုငျကတည်းက Cut-မှတဆင့်ညစ်ညူးခြင်းသို့မဟုတ်ခြင်းကို Case ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကွန်ယက်ကိုကွပ်မျက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားရွားလှအနားကွန်ရက်ပေါ်တွင်အနည်းငယ် gadgets အပေါင်းတို့၌နေစဉ်ထိပါးခကျြအောတုံ့ပြန်ဘယ်မှာမုန်တိုင်းများဆက်သွယ်ပြောဆိုစေနိုင်သည်။
ဘယျလုပျငနျးဟာ LLC Sub Layer ကိုအားဖြင့်ကျင်းပသလဲ?
LLC သို့မဟုတ် Logical Link ကိုထိန်းချုပ်ရေးအလွှာမဆိုလျှောက်လွှာဒီဇိုင်နာဖို့ပိုအခြားနည်းလမ်းပေးခြင်းဆီသို့ဦးတည်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကစတင် / ရပ်တန့် codes တွေကိုအသုံးချဖို့နှင့်အသုံးချဖို့ခြင်းဖြင့်စီးထိန်းချုပ်မှုများ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအလွှာထိုနည်းတူအမှားတွေများ၏ကိုးကွယ်ရာဆီသို့ဦးတည်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာအလွှာ၏3မှတ်သားဖွယ်ဒြပ်စင်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဤသည်ကို client များနှင့်လျှောက်လွှာအကြားအဆိုပါ interface ကိုပေးသောအလွှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကဒါကြောင့်ထွက်ကွဲပြားခြားနားသောဥပမာလျှောက်လွှာ, မေးလ်အုပ်ချုပ်ရေး, ကို web အုပ်ချုပ်ရေး, စာရွက်စာတမ်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသောအလွှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖောက်သည်များနှင့် server ကိုနှစ်ဦးစလုံးတွေအတွက် applications များတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နှင့်ချိန်ညှိရန်။
IGRP နှင့် RIP အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
IGRP အရည်အသွေး, ဒေတာ transfer စွမ်းရည်မယိမျးယိုငျကဲ့သို့ဒြပ်စင်အကဲဖြတ်ထားပါသည်စဉ်တွင်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကွန်ယက်ကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ပေးရတာလီချိုးနှင့်သမဂ္ဂခုန်, rip သီးသန့်ကွန်ယက်များအတွက်ပေးသောသင်တန်းနိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိုသိရန်အတုံနံပါတ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Boot ကို P ထံမှအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
အဆိုပါပြားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုပေးထားသောကွန်ရက်ကသူနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါစက်အတွက် Boot ကို P ကိုစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုအသုံးချပြီးအားဖြင့်ကို boot နေကြသည်။ အဆိုပါအတိုကောက်က "Boot ကိုအစီအစဉ်" အတွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီထက်အခြား, Boot ကို P ကိုဒါ့အပြင်အဆိုပါမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်များ၏လိပ်စာနှင့်ဆာဗာကို PC ရဲ့ IP address ကိုသိရန်အဆိုပါစက်အားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအင်တာဗျူးတွင်ဟုမေးစေခြင်းငှါအနည်းငယ်မေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ က may သကဲ့သို့, မေးခွန်းများကိုသင် CCNA လက်မှတ်ဘို့အာရုံကြားတွင်လေ့လာခဲ့ကွောငျးဆိုဘာသာရပ်ကနေဖြစ်နိုင်သည်ကိုရလိမ့်မည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ရမှတ်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်ပိုပြီးသေသေချာချာအင်တာဗျူးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်အောက်ဆုံးမှထိပ်တန်းအာရုံစူးစိုက်ရမည်။ ဤသည်ထိုနည်းတူသင့်ရဲ့သာယာဝအာမခံလိမ့်မယ်။